दाँत कति दन्त whitening गर्दैन। आधुनिक दन्त चिकित्सा मा दांत सुविधाहरू दाँत
कहिल्यै हिउँ-सेतो मुस्कान बारेमा विचार छ जो सबैसँग, बाहिर आंकडा दन्त whitening दाँत कति छ थियो। सेवाहरूको लागत खातामा कारक को एक किसिम लिन्छ गठन जो एक लचिलो मूल्य दायरा, छ।
दन्त विरंजन को प्रकार
कस्मेटिक दन्त चिकित्सा आफ्नो ग्राहकहरु दाँत चमकती धेरै विधिहरू प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक निम्न मापदण्डहरु अनुसार फरक, यसको आफ्नै विशेषताहरु छ:
नम्बर र उपचार को आवृत्ति;
ग्राहक को संलग्नता को डिग्री;
अभिकर्मकों र रचनाहरूको प्रयोग।
एक उज्ज्वल मुस्कान को मालिक बन्न चाहनेहरूको ती एक दन्त क्लिनिक को औसत मूल्य चिन्न मदत हुनेछ कि यस्तो सेवा प्रदान संस्थाहरु को अनुगमन पूरा गर्न सिफारिस गरिएको छ। तपाईं मात्र उच्च तर पनि कम लागत सेवाहरू wary हुनुपर्छ त दाँत दांत, आधुनिक उपकरण मा प्रदर्शन गरिएको छ। Suspiciously कम मूल्य सबै उचित र सुरक्षित whitening लागि आवश्यक अवस्था संग सेनेटरी मान्यता उल्लङ्घनको, वा गैर-अनुपालन संकेत हुन सक्छ।
डेस्क whitening: को सुविधाहरू
सबै भन्दा लोकप्रिय प्रयोगहरू अहिले मात्र हो दांत दाँत दन्त। मूल्यहरु, समीक्षा र प्रक्रियाहरु संस्था आधारमा एकदम फरक हुन सक्छ। सामान्य मा, सिद्धान्त नै रहन्छ - इच्छित रंग दिने दाँत त्यहि हालत peroxides को प्रयोग हो। Tissues संग अन्तिम अन्तरक्रिया अक्सिजन जो, बारी मा, गहिरो दांत संरचना मा, बाहिर उड्ने अँध्यारो क्षेत्रमा penetrates छुट्टयाएर।
त्यहाँ आधुनिक दन्त चिकित्सा मा दांत दाँत को निम्न सुविधाहरू छन्:
रंग - 7-8 मा चमकती (12 सम्म र विशेष अनुकूल अवस्थामा) को सम्भावना।
न्यूनतम समय (एक प्रक्रिया को अवधि 15 मिनेट देखि भिन्न एक घण्टा गर्न)।
चिरस्थायी प्रभाव (पूर्ण पाठ्यक्रम प्रक्रियाहरु को धेरै वर्ष को लागि रहन्छ)।
सुरक्षा, दाँत तामचीनी मा प्रभाव बख्शते (साधारण मिथक विपरीत, दांत को संरचना र निष्ठा क्षतिग्रस्त छैन)।
यदि आवश्यक, सम्भव analgesics प्रयोग गर्न (संवेदनशील गिजा र दाँत संग ग्राहकहरु स्पष्ट अब पनि प्रक्रिया पछि त्यहाँ खुजली डर छैन र झुनझुनी, यो लाभ मूल्यांकन)।
लचीलापन (कार्यालय र घर विरंजन संयोजन गर्ने क्षमता)।
यो दन्त मा दांत दाँत मात्र कति छ थाहा महत्त्वपूर्ण छ, तर कसरी यो प्रक्रिया छ। प्रत्येक संस्थाले आफ्नो रहस्य छ - नवीनतम उन्नत उपकरण - केही जेल, अन्य आफ्नै रचना को विशेष गर्व छन्।
प्रक्रिया को निम्न कदम बीचमा पहिचान गर्न सकिन्छ:
स्थापना retractor (विस्तार प्लेट guborasshiritelya)। यसरी श्लेम लाग्एको झिल्ली पूर्ण पहुँच प्राप्त, आफ्नो प्रचुर मात्रामा analgesics र सुरक्षा संरचना संग lubricated। यो सुरक्षा गर्न मद्दत गर्छ र मौखिक गुहा को दीपक को नकारात्मक प्रभाव र जेल को सक्रिय घटक विरुद्ध। त्यसपछि फिट कपास swabs गाला।
को विरंजन समाधान को आवेदन। विशेषज्ञहरु प्रक्रिया सकेसम्म ग्राहकहरुको लागि सहज धेरै र सुरक्षित बनाउन सबै विवरण प्रदान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यस्तो झुनझुनी रूपमा, भाषा को क्षेत्र मा अप्रिय sensations को घटना रोक्न, यो एक विशेष टिप-टोपी मा राखे।
अनावश्यक whitening। औसत उपचार बारे 15 मिनेट लिन्छ; यस समयमा यो अझै पनि थप सम्भव बस्न महत्त्वपूर्ण छ, तर दीपक मुख हुँदा, यो त सजिलो छ।
सहायक एजेन्ट चित्रकला। एक दिनमा एक भन्दा बढी whitening सत्रको लागि योजना छ जब यो चरण मात्र ती अवस्थामा आवश्यक छ।
को प्रक्रियाहरु गर्न अघि बढ्नु अघि, यो मौखिक गुहा को संवेदनशीलता को डिग्री निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। एनेस्थेसिया उपस्थिति वा अनुपस्थितिले सीधा दाँत whitening छ कति असर गर्छ।
सबैभन्दा चिकित्सा प्रक्रियाहरु मान्छे केही विभाग लागि सिफारिस गरिएको छैन, यो कुनै अपवाद छ, र दाँत दन्त whitening। Contraindications निम्न भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
अतिसंवेदनशीलता र दन्त तामचीनी;
चर्किएको को एक ठूलो संख्या;
को घर्षण र / वा वी आकारको कमजोरीहरू उपस्थिति वृद्धि;
उपस्थिति nezaplombirovannyh क्षय साइटहरूबाट।
वास्तवमा, कति दाँत whitening दन्त चिकित्सा, पनि अगाडि जोडी को स्पष्टीकरण लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जो छाप संख्या र आकार, प्रभावित छ। विरंजन को पछि बहाली entails केही अवस्थामा त सबै भर्नु सामाग्री, स्पष्ट गर्न सकिन्छ।
प्रक्रिया प्रकार चयन गर्नुहोस्
सबैभन्दा क्लिनिक उद्योग सेवा को एक विस्तृत श्रृंखला संग आफ्नो ग्राहकहरु प्रदान, केवल एक हार्डवेयर दाँत whitening सीमित छैन। त्यहाँ केवल एक हार्डवेयर Brightening असमान pigmentation अगाडि जोडी संग चाहेको प्रभाव छैन, जो जस्तै, अवस्थामा छन्। यस्तो परिस्थितिमा सक्नुहुन्छ एक दन्त चिकित्सक दाँत whitening संग र घर मा सफलतापूर्वक संयुक्त हुनेछ, र कहिले काँही उनि एक घर आधारित उपचार तोकिएको छन्।
घरमा विरंजन दाँत
कति whitening दन्त चिकित्सा सिकिसकेपछि ग्राहकहरु अक्सर वैकल्पिक तरिका खोजिरहेका छन्। अक्सर आफूलाई विशेषज्ञहरु परामर्श घरमा प्रकाश सिफारिस पछि।
whitening विशेष अक्षर प्रयोग (व्यक्तिगत विकास वा मानक, जो दाँत को कुनै पनि आकार अनुकूल प्रयोग गर्दछ);
यो जीवनको बानी ताल तोड्न आवश्यक छैन (क्याप मात्र सुत्दा वा अन्य कुनै पनि सुविधाजनक समयमा थकित गर्न सकिन्छ);
घर whitening सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा मद्दत गर्छ (जब तपाईं एक वा बढी दाँत हल्का गर्न आवश्यक);
रोगन चमकती बेचैनी (desensitization लागि विशेष gels प्रयोग) कारण छैन।
परिणाम तत्काल छैन, तर पर्खाइ यसलाई लायक छ। प्रक्रिया को अपेक्षाकृत कम लागत साथै, तिनीहरूले अवस्था परिवर्तन गर्न संभावना बिना कुर्सी बसेर को दीर्घकालीन प्रदान छैन।
त्यहाँ जो, यदि उपेक्षा अप्रभावी whitening दन्त बनाउन सक्छ सावधानीहरु को एक नम्बर हो। ग्राहक जो छुँदै नछुने छ प्रयोगबाट, उत्पादनहरु को सूची उत्पन्न गर्न मद्दत गर्न समीक्षा:
फल र तरकारी (बीट, cranberries, सबै भन्दा जामुन) रङ लगाउन;
रंजक (मुख्य रूप aerated) युक्त पेय पदार्थ;
कफी र चिया;
मिठाई र पेस्ट्री;
चुरोट र रक्सी।
यस्तो प्रतिबन्ध मात्र दिन को एक जोडी को लागि लगाएको छन्। त्यसपछि, माथि दिइएका उत्पादनहरु को कुनै पनि आश्चर्य परिचित हिउँ मुस्कान रोक्न छैन।
दन्त क्लिनिक को ग्राहक समीक्षा पढेपछि तपाईं प्रक्रियाहरु को प्रकार को प्रत्येक लागि छोटो सारांश बनाउन सक्छ। डेस्क whitening विज्ञापन मा लेखिएको छ भन्दा धेरै समय लाग्न सक्छ। तर, धेरै दाँत को संवेदनशीलता, विशेष गरी सजिलै देखिने तातो खपत गर्दा वृद्धि उल्लेख गरे। विरामीहरु, घर उपचार को बहुमत अनुसार, हुनत यो तत्काल परिणाम प्रदान गर्दैन, यो एक सहज र कोमल सकिन्छ।
सेवाहरूको लागत गणना
पत्ता लगाउन दन्त चिकित्सा मा दांत दाँत कति छ क्रममा, यो मूल्य निर्धारण के कारक प्रभावित विचार गर्न आवश्यक छ। मापदण्ड सेवा को लागत असर:
क्षेत्र। .. दाँत whitening औसत मूल्य भिन्न श्रेणी को प्रान्त लागि 15-25 बीच हजार rubles, राजधानी अलिकति कम छ भने - 10-15 हजार rubles ..
स्थान र क्लिनिक लोकप्रियता। शहर को केन्द्र मा स्थित Untwisted प्रतिष्ठानबाट, सामान्यतया आफ्नो मूल्य सूची द्वारा प्रतिष्ठित। थप रिमोट क्लिनिक नियम, एउटै सेवाको रूपमा प्रदान गर्न, तर 10-30% को मार्जिन नगर्नुहोस्।
पद्धति। कार्यालय र घर whitening मात्र होइन कार्यान्वयन को विधि र अवधिका लागि एकदम फरक, तर पनि यसको अन्तिम मूल्य गर्न। एक अनुकूलन बनाएको टोपी मुद्रा मा उड्न सक्छ किनभने प्रक्रियाहरु को जो, सस्ता हुनेछ भन्न सक्दैन।
को योगों प्रयोग। दांत लागू छन् पदार्थ फरक संस्थाहरू लागि फरक हुन सक्छ।
एनेस्थेसिया। analgesics को लागत धेरै चरणमा क्लिनिक धाउन विशेष गरी भने, विरंजन को मूल्य बढाउन सक्छ।
को मौखिक गुहा को स्थिति। छाप को एक ठूलो संख्या पनि सेवाहरू अन्तिम लागत प्रतिबिम्बित गरिएको छ। तथ्यलाई अन्त मा छाप तिनीहरूले दाँत बाँकी देखि रंग मा फरक थिएन भनेर, परिवर्तन हुनेछ भन्ने छ।
गणना कति दाँत whitening मात्र अनुमानित हुन सक्छ। प्रत्येक व्यक्ति मामला मा उपस्थित या अनुपस्थित हुन सक्छ कि धेरै चर छन्।
प्रक्रियाहरु को प्रकार को प्रत्येक लागि औसत मूल्यहरु
तपाईं कत्तिको ब्लीच जान्न चाहन्छु गर्नेहरूका लागि एक सरल गणना गर्न सक्दैन। दाँत मूल्य समीक्षा प्रत्येक क्षेत्रका लागि अलि फरक हुन, तर औसत मा प्रक्रियाहरु को लागत लगभग छ हुनेछ:
क्लिनिक मा दांत
दाँत मुकुट भित्र whitening 3000-4000 rubles।
दाँत को विरंजन (प्रति उपचार) 9000-10 000 rubles।
विरंजन हार्डवेयर प्रकार
लेजर विरंजन 25 000-30 000 दल्नु।
photodynamic प्रकाश 30 000-35 000 दल्नु।
संरचना carbamide पेरोक्साइड आधारित 750-1000 rubles।
संरचना हाइड्रोजन पेरोक्साइड आधारित 15 000-17 000 दल्नु।
देख्न सकिन्छ रूप मा, प्लग को लागत त्यसैले तपाईं स्वीकार्य लागत अधिकतम प्रभाव दिन हुनेछ प्रक्रियाहरु को ठीक प्रकार चयन गर्नुपर्छ, बरु ठूलो छ।
विरंजन बारेमा सामान्य मिथक
विभिन्न फोरम यो प्रक्रिया बारे गलतफहमियहरुलाई विभिन्न पाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, प्रभाव कुनै छ अधिक महिना वा चमकती दांत संरचना बिगार्न सक्छ रहन्छ। नियम यस्ता स्थितिहरू एक वास्तविक धेरै छन्, र एक विशेषज्ञ संग पहिलो परामर्श धेरै पूर्वाग्रहको छुटकारा मदत गर्नेछ प्राप्त।
दाँत Whitening: निष्कर्ष
यसलाई आफ्नो दाँत सेतो गर्ने कि नगर्ने निश्चय साथ भन्न असम्भव छ। यो पनि नाम गाह्रो छ, र सेवाको विशिष्ट मूल्य। मात्र परिणाम तर प्रविधी को एक सम्भव विकल्प दाँत को प्रारम्भिक राज्य मा निर्भर गर्दछ। ह्यु, क्षति वा छाप क्षेत्रमा पर्याप्त उपचार को दायरा सीमित हुन सक्छ।
केवल एक सिफारिस सकिन्छ - अन्तमा whitening प्रकार निर्धारण अघि, तपाईं एक विशेषज्ञ परामर्श गर्नुपर्छ। सौंदर्यबोध cosmetology को मालिकको सबै भन्दा राम्रो विकल्प ब्लीच व्यक्तिगत चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो उच्चतम प्रदर्शन देखाउन चमकती छ।
पनि मूल्य को प्रक्रियाहरु को समय को सुरु। को कुर्सी मा केही घण्टा खर्च गर्न सजिलो कसैले, तर त्यसपछि असुविधाहरु सबै प्रकारका बारेमा बिर्सन्छन्। अरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत समय त्यागी बिना सुत्दा एक मुख गार्ड लगाउन सजिलो छन्। सिक्ने पछि कति केही सजिलो बढि आर्थिक विकल्प चयन गर्न, दन्त चिकित्सक मा र घर मा दांत दाँत छ।
हिउँ-सेतो मुस्कान - यो सिर्फ समाधान गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका चयन गर्न एकै समयमा सबै सम्भव असुविधाहरु जोगिन गर्न, आवश्यकता, एकदम सम्भाव्य कार्य हो।
कोथ संबंधी pulpitis: कारण, लक्षण, उपचार
कसरी आफ्नो हातले दाँत गर्न फिक्स गर्न?
दांतको बहाली, लोकप्रिय दन्त चिकित्सा सेवा
Aligners: दाँत पङ्क्तिबद्ध लागि कापा समीक्षा
के तपाईं दन्त प्रत्यारोपण प्रक्रिया बारे जान्नु आवश्यक?
Aspic बीफ: तैयारी दुई विधिहरू
"Amizon": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
Cortana के हो? अवलोकन आवाज सहायक सुविधाहरू
इस्लाम: संसार धर्मको गठन र विकास
एक माकुरा खानको पत्ता यदि के गर्न?
टीबी कस्तो छ?
"Maynkraft": griferstvo। "Maynkraft": griferstvo सर्भर
Gyroscopic प्रभाव - आसपास रन सम्म खडा
क्लिनिक "डा नजिकै": प्रतिक्रिया कर्मचारी र बिरामीको देखि
पिस्तौल एमआर-651K: विवरण र समीक्षा। Airguns
चकलेट केले केक। पकाउने गर्न गोप्य
काला मरुभूमि मा एक नोड कसरी कब्जा गर्न र कसरी यो सक्रिय?